ကျနော်တို့တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်, အများဆုံးအဆင့်မြင့် Pre- ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အတူ,ပုံနှိပ်, ပုံနှိပ်ပြီးနောက်ကိရိယာများနှင့်နည်းစနစ်များ.
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များမှာလက်ဆောင်သေတ္တာများဖြစ်သည်, အထူးသဖြင့်လက်ရာမြောက်သောလက်ဝတ်ရတနာသေတ္တာ, ရတနာသေတ္တာ, စက္ကူလက်ဆောင်သေတ္တာ, ကတ်ထူပြား, စက္ကူဘူး, ပုံးပုံး, ချောကလက်သေတ္တာ, မြှောင်းပုံသေတ္တာ, ထုပ်ပိုးသေတ္တာ, စက္ကူထုပ်ပိုး, စက္ကူအိတ်, လက်ဆောင်အိတ်,နှင့်စျေးဝယ်အိတ်,နာရီလေးထောင့်ကွက်, အလှကုန်သေတ္တာ, perfume box, စသည်တို့. High quality and strict QC is our principle and our culture. 80% of our workers are over 10 years experiences.
ပစ္စည်း 250gsm art paper, or black cardboard/ special paper
အရွယ်အစား 30x15x6cm, 30x20x6cm, 33x25x7cm or custom
ပုံနှိပ်ခြင်း CMYK4အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း, or custom
မျက်နှာပြင်ဖျက်ခြင်း Glossy, or matte
ကိုင်တွယ် ဖဲကြိုး, or custom
အသုံးပြုမှု Hair bundles, အဝတ်အစား, gift packaging
ငွေပေးချေမှု ကုန်သွယ်ရေးအာမခံချက်, T / T , Paypal, Western union
ကြာမြင့်ချိန် 7-9 workdays
We have professional services and ability to customize your own products. With our own manufacturing factory and R&D အသင်း, we are able to analyze and customize the products suit for all-purpose customer all over the world.